တရုတ်၏ပထမဆုံး 4K OB ဗန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး 4K OB Van
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး 4K OB Van
တရုတ်အခြေစိုက်ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီကြီး Jiangsu အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း ကသစ်ကို 24 ကင်မရာ, တစ်ဦး 29-Wheeler ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအံ့သြဖွယ် 18 အလုပ်ခွင်ကမ်းလှမ်းရာကို double-ဘက်တိုးချဲ့ရေး OB ဗန်ရဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်! အဆိုပါ 4K OB Van 16 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် HD ကင်မရာများ, 4-4K ကင်မရာများပေါင်း4ကြိုးမဲ့ကင်မရာများ၏ဆက်ပြောသည်ဇိမ်ခံ။ LSB အသံလွှင့် Technologies က အဆိုပါရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောဘေးထွက်ဒေသခံမိတ်ဖက် NDT တလျှောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ virtual စတူဒီယို Manager ကို (VSM) ဒီခေတ်သစ်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှု!
အဆိုပါနည်းပြဆောက် ASGB, Sony က တရုတ် Professional ကစနစ်များ Group နှင့်အဆိုပါ NDT Group မှအနုပညာ 4K လက်ရာ၏ဤခေတ်သစ်ပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပူးတွဲအလုပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ VSM အမြင့်ဆုံးလုံခြုံအတိုင်းအတာကျရှုံးမှုအတွက် VSM ရဲ့ထူးခြားတဲ့ redundancy concept ကိုသုံးပြီးမာစတာ-မာစတာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှစ်ခုကသီးခြား server များပေါ်တွင်အပြေးနေသည်။ တစ်ဦးကတတိယဆာဗာကို LS-B က၏ကိုယ်ပိုင်မီးတောက် + protocol ကိုနှင့် vSNMP application.The VSM software ကိုသုံးပြီးစောင့်ကြည့်ရေးပစ္စည်းတွေအတွက်အသုံးပြုသည်အမြန်ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးပေးသည်ကို၎င်း, 19 VSM ဟာ့ဒ်ဝဲပြားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တာဝန်ခံအတွက် Engineer အဖို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် configuration ကိုပေးသည် (EIC) ။
အဆိုပါ OB Van ရဲ့ VSM ပုဖို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ် Evertz crosspoint လမ်းကြောင်းနှင့် (2) မှ xenon Router က Sony က MVS 7000X Tally ကို, UMD များ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင်တန်း၏ရူပါရုံကို Switcher, အ JSBC 4K OB Van အတွက်တည်ရှိသော crosspoints ။ အသံ console ကိုတစ်ဦးအပေါ်ဆွဲယူလာသည် Lawo mc266 MKII နှင့်အတူ Lawo အဆိုပါ VSM တိုက်ရိုက်ပြောသွား, နှင့် crosspoint လမ်းကြောင်းနှင့် parameter သည်ထိန်းချုပ်မှုကိုင်တွယ်ရသော nova Core နှင့် Dallis ဘောင်များ။ အဆိုပါမော်နီတာမြို့ရိုးကို 8 နှင့်အတူအစားကြီးမားဖြစ်ပါသည် Sony က LMD 42 "(ထုတ်လုပ်မှု A) ကိုပေါင်း 8 Sony က PVM (4K များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုခ) နှင့်အတူအလုပ်လုပ်စောင့်ကြည့် Evertz VIPX နှင့် VIPA မြင်ကွင်းစုံစနစ်များကို။
Jiangsu အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း 4K ဘို့ဘဏ်ဍာကို "စံ" အဖြစ်ယူဆမည်ဖြစ်ပြီး LSB အသံလွှင့်ခြင်းအားဖြင့် VSM စိတ်ကိုစစ်ဆင်ရေး၏ JSBC 24 /7/ 365 လွယ်ကူခြင်းပေးသည်!
LSB အသံလွှင့် Technologies က GmbH သည်, Wiesbaden (ဂျာမနီ), ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ core ထုတ်ကုန်ရဲ့ IP-based ကို Virtual စတူဒီယို Manager ကို (VSM), တစ်ခု universal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ single-source ကိုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်, VSM မဆိုတစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်သူများ၏လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်တယ်ကားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသံလွှင့်များ၏နယ်ပယ်များတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ဖြေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, LSB အသံလွှင့် Technologies ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရောင်း network ပေါ်မှာဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Wiesbaden အတွက်ရုံးချုပ်မှာ 35 ၏တစ်ဦးကဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု, စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် software နဲ့ hardware ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.lsb.de.
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-07-30
ယခင်: audio Visual ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု
နောက်တစ်ခု: Zylight '' နွေရာသီချွေတာသုံးစွဲ '' ပြန်အမ်းအစီအစဉ်ကမ်းလှမ်း